प्रमुख समाचार | Nepstok
August 16, 2021 NepstokLeaveaComment on प्रहरीको नया तलब हेर्नुहोस : कुन पदमा हुनेले कति पाउछन ? आईजीपीको कति ? सम्पूर्ण दर्जासहित
काठमाडौँ | सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेमा राष्ट्रसेवक (सरकारी) कर्मचारीको तलब १८ देखि २० प्रतिशतले वृद्धि गरेको छ । सरकारले बढाएको तलबअनुसार नेपाल प्रहरीमा कार्यरत प्रहरी कर्मचारीको पनि तलब बढेको छ । नेपाल प्रहरीका प्रहरी कर्मचारीको निम्नानुसार तलब बढेको छ । नेपाल प्रहरीमा यस्तो छ बढेको तलब (यसमा ग्रेड, महंगी भत्ता तथा दुर्गम भत्ता र […]
July 15, 2021 NepstokLeaveaComment on काठमाडौंको नयाँ बसपार्कमा यस्तो धन्दा गरिरहदा पक्राउ परे यी दुई जना
काठमाडौं – काठमाडौंको नयाँ बसपार्कबाट प्रहरीले दुई जनालाई पक्राउ गरेको छ । पक्राउ पर्नेमा झापाको शिवसताक्षी नगरपालिका घर भएका देउमान तुम्रुक र विपिन चेम्जोङ छन् । ला गु औ ष ध नियन्त्रण ब्यूरो, कोटेश्वरबाट खटिएको टोलीले उनीहरुलाई प क्राउ गरेको हो । आरोपीहरुको साथबाट २८ ग्राम हे रो इ न बरा मद गरिएको नियन्त्रण ब्यूरोले […]
July 3, 2021 NepstokLeaveaComment on अन्ततः बेपत्ता भएको २३ दिनपछि टिकारामको शव यस्तो अवस्थामा फेलापर्यो
गत जेठ २८ गते घरबाट एकाएक बेपत्ता भएका शिखर नगरपालिका–४ गरुडी बस्ने २७ वर्षीय टीकाराम भट्टको शव फेला परेको छ । जिल्ला प्रहरी कार्यालय डोटीका मुद्दाफँटका प्रहरी निरीक्षक कान्तिराज जोशीका अनुसार घरबाटै हराएका भट्टको शव २३ दिनपछि आज शिखर नरपालिका–६ मा रहेको खनकट्टे सामुदायिक वनको भुरीइजरमा भेटिएको हो । भट्टको शव सडेको अवस्थामा गोरु गोठालाले […]
July 3, 2021 NepstokLeaveaComment on साउन १ गतेबाट नेपालमा टिक’टक एकाउन्ट ब’न्द हुँदै ! ठिक कि बेठिक
१३ वर्षभन्दा कम उमेरका बालबालिकाहरुका झण्डै ७३ लाख एकाउन्ट टिकटकले बन्द गरिदिएको छ । यो वर्ष सन् २०२१ को पहिलो त्रैमासिकमा टिकटकले बालबालिकाको भनेर आशंका गरिएको भनिएका लाखौँ एकाउन्ट बन्द गरिदिएको हो । यो संख्या टिकटकका विश्वव्यापी प्रयोगकर्ताको संख्याको १ प्रतिशत मात्रै हो । ट्विटरको नियमानुसार १३ वर्ष र सोभन्दा माथिको उमेरका व्यक्तिले मात्र टिकटकमा […]
July 3, 2021 NepstokLeaveaComment on सप्तकोसी नदीको बहाव बढे संगै २८ ढोका खुला, सतर्क रहन आग्रह
सुनसरी । लगातारको वर्षाका कारण सँगै सप्तकोसी नदीको बहाव बढेको छ । शुक्रबार राति १२ बजेसम्म बहाव एक लाख ५५ हजार सात सय ७५ क्यूसेक रहेको शनिबार बिहान ६ बजे पानीको बहाव एक लाख ८० हजार सात सय ७० क्यूसेक मापन गरिएको र रातभरमा पानीको बहाव २४ हजार नौ सय ९५ क्यूसेक बढेको हो । […]
July 2, 2021 NepstokLeaveaComment on राजनीतिक माहोल तातिरहेकै बेला नेपाली सेनाको मनमुटु छुनेगरी प्रधानमन्त्री ओलीले गरिदिए बोल्ड निर्णय !
राजनीतिक माहोल तातिरहेकै बेला नेपाली सेनाको मनमुटु छुनेगरी प्रधानमन्त्री ओलीले गरिदिए बोल्ड निर्णय ! काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलेको निर्णयले नेपाली सेनामा खुसीयाली छाएको छ । प्रम ओलीले नेपाली सेनालाई छुनेगरी एउटा निर्णय लिएका हुन् । ओलीले सरदार भक्ति थापालाई मन्त्रिपरिषद्बाट राष्ट्रिय विभूति घोषणाको निर्णय गराएका हुन् । यो निर्णयले नेपाली सेनामा खुसियाली ल्याएको […]
बैंकबाट पाउनुहोस् बिना धितो १५ लाखसम्म ऋणकाठमाडौं । गरिमा विकास बैंक लिमिटेडले पेशागत कर्जा सार्वजनिक गरेको छ । सपनालाई एउटा नयाँ उडानः पेशागत कर्जा, बिना धितो नारासहित बैंकले उक्त योजना सार्वजनिक गरेको हो । योजना अनुसार न्यनुतम व्याजदरमा विना धितो १५ लाख सम्मको कर्जा दिने बैंकले दिने भएको छ ।*** यो समाचार को पुरा भिडियो […]
July 1, 2021 NepstokLeaveaComment on OMG जंगलमा दुई बिद्यार्थीको शव यस्तो हेर्नै नसकिने अवस्थामा फेला पर्यो !
काठमाडौँ । काठमाडौँको चाल्नाखेलमा दुई युवकको शव फेला परेको छ । काठमाडौंको दक्षिणकाली नगरपालिका–१ खहरे, चाल्नाखेलमा फेला परेको श’व विद्यार्थीको भएको पुष्टि भएको हो । शुक्रवार खहरेस्थित जंगलमा दुई जनाको श’व फेला परेको थियो । मृ’तकका आफन्तमार्फत प्रहरीले श’वको पहिचान खुलाएको हो ।’महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौँका प्रमुख एसएसपी अशोक सिंहका अनुसार १६ र १८ वर्षका […]
July 1, 2021 July 1, 2021 NepstokLeaveaComment on पाप धुरीबाट करायोः पूर्व मुख्यमन्त्रीलाई धोका दिएका दिपक मनाङेलाई लाग्यो ४४० भोल्टको झड्का !
गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले दुई जना मन्त्रीलाई आज जिम्मेवारी तोकेका छन् । मन्त्रिपरिषदमा रहेका ४ जना मन्त्रीमध्ये २ जनालाई आज जिम्मेवारी तोकिएको हो । प्रदेश प्रमुख सीताकुमारी पौडेलले मुख्यमन्त्री पोखरेलको सिफारिसमा मन्त्रीहरू कुमार खड्का र मधुमाया अधिकारीलाई मन्त्रालय तोकेका छन् । नेपाली कांग्रेसबाट मन्त्री बनेका खड्कालाई सामाजिक विकास मन्त्रालय र माओवादी केन्द्रबाट मन्त्री […]
काठमाडौँ, असार १६ गते । ट्राफिक प्रहरीले यात्रुसँग तोकिएकोभन्दा बढी भाडा लिने आठ जनालाई पक्राउ गरेको छ । महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखा रामशाहपथबाट सादा पोसाकमा खटिएको प्रहरी टोलीले यात्रुसँग बढी भाडा लिने आठ जनालाई मङ्गलबार र आज बिहान पक्राउ गरेको हो । पक्राउ पर्नेमा दाङ घर भएका ३५ वर्षीय सन्तोष दमाई, ३८ वर्षीय कुशलराम बस्नेत, […]